The Dark Eye - Satinav ချည်နှောင်မှုန့်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာရောင်းချသည် ငါက Mac ကပါ
The Dark Eye - Satinav ၏ချည်နှောင်မှု, အကန့်အသတ်ဖြင့်ရောင်းချသည်
ကန့်သတ်အချိန် 'The Dark Eye - Satinav ချည်နှောင်မှု' ဒါဟာကျိုးနွံစျေးနှုန်းလျှော့ချဖြစ်ပါတယ် 4,99 €အစား€ 21,99 ၎င်း၏ပုံမှန်အတိုင်းစျေးနှုန်း၏။ ဒီဂိမ်းဟာ Andergast မှာဖြစ်ပြီးအဆင့်မြင့်ရာထူးကြီးကြပ်မှူးတွေလာရောက်လည်ပတ်ဖို့ဘုရင်ကိုစောင့်ဆိုင်းနေတယ်။ ဒီနိုင်ငံမှာရှိနေတယ် ပဋိပက္ခ ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာအနီးအနားရှိ Nostria နှင့်အတူရှိသော်လည်းငြိမ်းချမ်းရေးသည်ပိုမိုနီးစပ်ပုံရသည်။ ဒါပေမယ့်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုရင်ကစိတ်ပူနေတာပဲ ကျီးကန်းဘေး သူတို့ဟာပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ရန်လိုမှုတွေနဲ့လူတွေကိုတိုက်ခိုက်ကြပြီးနိုင်ငံသားတွေကြားမှာအဲဒီကျိန်ဆိုခြင်းကိုခံနေကြရတယ် ကျီးကန်းမှောင်မိုက်အိပ်မက်ဆိုးဆောင်ခဲ့ရမည်။ ဘုရင်သည်ငှက်မုဆိုးကိုရှာဖွေရန်ငယ်ရွယ်သော Geron အားငယ်ရွယ်စဉ်ကတည်းကသူနှင့်အတူလိုက်ပါခဲ့သောကံဆိုးသူများ၏ကျော်ကြားမှုကိုပြသရန်အခွင့်အရေးရှာသည်။ ဒီမှာမင်းကိုချန်ထားတယ် ဂိမ်း.
တစ် ဦး ကအစအသစ်နှင့် The Whispered ကမ္ဘာ၏ဖန်တီးသူမှ
'Aventuria' ၏စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောကမ္ဘာတွင်မိမိကိုယ်ကိုနှစ်မြှုပ်ပြီးလူကြိုက်များသောခဲတံနှင့်စက္ကူသဏ္playingာန်တူသရုပ်ဆောင်သည့် The Dark Eye ဂိမ်းမှကျွမ်းကျင်သူစာရေးဆရာများရေးသားထားသောအမှတ်တရအမှတ်အသားပြုသည့်စွန့်စားခန်းတစ်ခုကိုတွေ့ကြုံခံစားပါ။
updated: 29 / 10 / 2014
အရွယ်: 5.83 GB ကို
ဘာသာစကားဂျာမန်၊ ပြင်သစ်၊ အင်္ဂလိပ်၊ အီတလီ၊
compatibility10.7-bit processor OS X 64 သို့မဟုတ်ထိုထက်နောက်ကျသည်။
ဝယ်ယူ 'The Dark Eye - Satinav ချည်နှောင်မှု' တိုက်ရိုက်ကနေ Mac က App Store ကိုအောက်ပါ link ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်။
The Dark Eye - Satinav ချည်နှောင်မှု€ 19,99
ထို့နောက်အောက်ပါ link ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ဤဆော့ဖ်ဝဲရေးသူထံမှဂိမ်းများကိုထပ်မံရှာနိုင်သည်။Daedalic ဖြစ်သည်' ထို့အပြင်သင် Steam တွင်ပိုမိုစျေး ၀ ယ်သည်ဆိုပါက၎င်းကိုအောက်ပါ၌တွေ့နိုင်သည် link ကို.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Mac ပရိုဂရမ်များ » အားကစားပြိုင်ပွဲ » The Dark Eye - Satinav ၏ချည်နှောင်မှု, အကန့်အသတ်ဖြင့်ရောင်းချသည်
ယခု TV TV4ကိုပြန်လည်ပြုပြင်ထားသောစပိန်နိုင်ငံတွင်ရရှိနိုင်သည်
Spotify သည် Apple Music မှဖောက်သည်များကိုဖယ်ရှားရန်ကင်ပိန်းကိုစတင်သည်